Fromlinux horeyba wuxuu u lahaa in kabadan 100 000 booqasho | Laga soo bilaabo Linux
Fromlinux horeyba wuxuu u lahaa in kabadan 100 booqasho
Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaagno qaar ka mid ah tirakoobyadeenna sidaasna aan maanta idinkula socodsiinno <° Linux ayaa dhaaftay 100 000 booqashooyinka Bilaha 5 in aan ku qaadno internetka.
Runtii maahan lambar aad u khuseeya, laakiin tixgelinta muddadii aan shaqeynaynay ee aan haysannay bishii Agoosto, iyo in aan weli aad u yar nahay, waxaan u aragnaa in tiradan ay tahay mid dhiirrigelin leh.
Ujeeddadeennu ma ahan inaan la tartano bog kale. Waxaan kaliya dooneynaa inaan ku siino aqoonteena adoo adeegsanaya bartan isla markaana aan isku weydaarsano khibradaheena dhamaantiin, abuuritaanka meel caadi ah oo wax lagu is dhaafsado.
Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan dadka maalin walba na aqriya ee nala wadaaga. Si ahaan waxaan dareemeynaa inay yihiin qayb aad muhiim ugu ah <° Linux. Aad baad u mahadsantahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Fromlinux horeyba wuxuu u lahaa in kabadan 100 booqasho
Waxaan kuugu hambalyeynayaa booqashadaada 1 × 10 ^ 5 🙂
Mahadsanid sxb, farxad inaan halkaan markale kugu aqriyo 😀
Balooggu wuxuu noqon doonaa dhalinyaro, maahan adiga HAHAHA.
Waa baloog leh cusbooneysiin isdaba joog ah isla markaana iska dhigaya mid aan eex lahayn, taas oo ah sirta ay ku shaqeyneyso balooggu
Laakiin muxuu cunuggan ka hadlayaa? Halkaan waxaan nahay dhamaanteen nin dhalinyaro ah .. Dhamaan ...
Dhamaan dhalinyarada ku jirta balooggan inay horey u socdaan ... siiwadow waxaad joogi doontaa meesha aad joogto. HAHAHAJAJAJAJA.
HAHAHAHAHAHA sidaan ugu qoslay HAHAHAHAHA.
Elav waa 32 jir laakiin kaalay, nin da 'weyn ma aha sidoo kale HAHAHA
Hahahaha 32 sano jir, ma waxaad noqon doontaa bahasha Marka haddii aan 32 ahay waxaad tahay 31 Miyaanay ku caajisayn? LOL
Ma waxaad iga weyntahay 1 sano oo kaliya? nasiib maleh ... WTF !!!
Aan aragno, kaftanka hadda ayaan ka tagayaa, waxaan ahay 21 jir (waxaan ahay 22 jir hadda Nofeembar 20), waxaad tahay 23 ama 24 maahan?
Hahaha laakiin haddii aan kaliya ahay 24 .. Waxaan ka yarahay dhawr akhristayaal ...
Hagaag haa, waxaan ahay 29. Waxaan dareemayaa gabow kaa xiga.
Laakiin haye, waxaan rabay inaan tan u qoro Elav iyo Gaara:
Waan kugu hambalyeynayaa. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awoodo inaan u imaado degelkan si aan u barto waxyaabo cusub, si aan wax uga ogaado wararka qaarna, waxaas oo dhan ka sokow, waxaan jeclahay in qaabka qoraalkaagu u yahay mid aad u wanaagsan. Way fiicantahay in lagu qoro qoraaladaada dabeecad wadaagid iyo barid sida ugu macquulsan waxa ka dhacaya aduunka Linux iyo sida loo fuliyo habab kala duwan. Waxaan sidaa u iri sababtoo ah waxaa jira kuwa kale oo aaminsan inay "aad iyo aad u" yihiin, laakiin ra'yigooda waa mid eex, qaar xumaan qaba, qaar kalena waxay muujinayaan wax ka duwan xaqiiqda, sidoo kale, xitaa ma ka hadlaan kuwaas.
Ku kalsoonow shaqadan. Waan la dhacsanahay in markasta oo aan imaado ay mar horeba jiraan dhawr maqaal oo cusub. Ah, wax kale oo aan jecelahay ayaa ah gariirka wanaagsan ee idin dhex yaal. Geesinimaduna kama maqna, sida had iyo jeer faallooyinkiisa iga qosliya. Hadda oo aan ka fikiro da ', xitaa Dhiiranaanta waxay noqon kartaa wiilkayga, ha ha ha.
Hagaag, waad mahadsantahay oo la soco mashruuca. Farxad!
wow aad baad ugu mahadsantahay faallooyinka, waad arki kartaa inay tahay sida ugu macquulsan uguna macquulsan, runti waad ku mahadsan tahay saaxiib.
vibes wanaagsan? haha ... sheekada si kooban ayaan u sameyn doonaa 😉
faahfaahsan oo waxaan la kulmay dhawr sano ka hor, aniga iyo isaga waxaan isku baranay isku iskuul, laakiin waligeen maanaan kulmin. Markii aan bilaabay Linux wuxuu gacan igu siiyay server-yada iyo waxyaabo kale, laakiin markii aan bilaabay inaan helo "aqoonsigeyga", waa hagaag ... aan dhaho waxaan ahaa anti-debian, pro-ubuntu iyo sida faahfaahsan Waxay ahayd wax cakis ah, markasta waanu murmi jirnay oo waanu samayn jirnay kaftan (wali waanu qabanaa LOL) laakiin waan cadaynayaa, wax walba markasta waxay ku jireen jawi wanaagsan 😀
Waqtigaas waxaan bilaabay inaan barto tabaha, mar walbana waxaan ahaa nooca qof jecel inuu wax la wadaago, sidaa darteed waxaan sameeyay baloog si aan u soo dhigo waaya-aragnimadayda adduunkan Linux: http://kzkggaara.wordpress.com
Elav lahaahttp://elavdeveloper.wordpress.com) iyo haha, waa hagaag ... had iyo jeer wuu iga badnaa booqashooyin aniga iga badan, maxaa yeelay sidaad aragtoba, wuxuu iguqaadaa waqti qoris badan aniga (bal fiiri tirada maqaalada uu daabacay HAHA) Tanina waxay ahayd sabab kale oo kaftan ah, kaftan ah, hadalo jees jees ah iyo waxkasta oo isaga loogu deydo LOL !!!
Waqtigu wuu dhaafay waxaana la ina siiyay suurtagalnimada helitaanka degelkeenna iyo degelkeenna (kun mahadsanid mahadsanid) Renata y Gabriela, maamullada http://artescritorio.com, way suurto geliyeen waxaas aad aragto oo dhan, weligeen waan mahadnaqaynaa) halkanna waa 🙂
¿Courage? ... Gaalayahan oo leh boodooyin xun ayaa soo muuqday markii aniga iyo faahfaahsan waxaan ku qornay kaliya boggaga internetka, waxaan ku helnay wax qosol badan maxaa Courage Wuxuu ku soo qoray boggiisa, oo ay ka buuxaan cay, dembiyo iyo qaab kaftan badan oo diiqadda looga dejiyo: U dhaliil Ubuntu LOL !!!
faahfaahsan oo uu yara fahmay, laakiin taasi waa halkii ay ka soo baxeen gariirkii wanaagsanaa ee sida aad sheegtay, waxaan ka dhexeynay 3deenna.
Mar ay jirtay <° Linux, waxaan si rasmi ah ugu shaacinaynaa Courage like our Troll rasmiga ah No.1 haha.
La'aanta Edward2, Troll our rasmiga No.2, oo aan soo bixin maanta ... Waa inaan ka gooyaa maalinta mushaharkiisa HAHA.
Weli waxaa jira waxyaabo badan oo la qoro ... keligeen ma nihin faahfaahsan Aniguna waxaan ahay halyeeyada arinkan, idinkuna sidoo kale ... runtiina, waxaan rajaynayaa inaan dhowaan siiyo layaab badan 😀
Uff… Waxaan idhi way soo gaabaysaa HAHAHAHAHAHA !!!!!
Waa hagaag, waxaan u furay bartaas si aan u arko haddii habkaas aan haween uga saari karo (ma fiicna?) Madaxayga hahaha. Mana jirin kaliya dhaleeceyn Ubuntu, laakiin Apple, Gibson iyo Dofus hahahaha.
Maalinta Spain loogu yeero Galicia, waxaad xaq u lahaan doontaa inaad eraygaas u adeegsato kuwa naga mid ah ee aan ahayn Gaalaliyiin hahahahahaha
Waxa indhahayga soo jiitay waa shayga "iska dhigaya mid aan eex lahayn" ... sideen iska yeelyeelnaa?
Waxaan aaminsanahay in dhex-dhexaadnimada buuxda ay tahay wax aan macquul aheyn ama aan macquul aheyn in la gaaro
Haa, waan ogahay, laakiin waxaad tidhi waxay u ekaayeen:
«Waxay ku andacoodaan inaynan eexanayn laakiin waa taageereyaasha X distro waxayna jecelyihiin iwm iwm» LOL !!!
mmm ka dib markii uu yiri tan, troll ayaa maqan oo hubaal sheegi doona wax la mid ah: <° Ubuntu ama wax la mid ah HAHA
Adiga iyo elav waxay leeyihiin quluubtooda yar, mise anigu waan qaldanahay? hehehehehe.
Hambalyo waxaanan u baxnaa booqashooyinka milyanka ah.
Uff… million… oo u eg wax weyn hehe .. WAAN KA JECLAHAY !!! 😀
Haddaanan ku hammin waxyaalo waaweyn, midkoodna tan iima qalmi doono.
Runtii, kun waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin ... hoosta qalbigayga oo ka daacad badan sidii hore, kun mahadsanid dhammaantiin, ayaa sabab u ah balooggan, nuxurkiisa iyo shaqadeenna halkan. T_T
Laakiin sida caadifad ahaantaadu u hesho .. Waxaad mooddaa gabadh: CARRY LIKE A PUSSY MAN hahahaha
Waan ku faraxsanahay warka.
Waad ku mahadsantahay joojinta iyo faallooyinka, aqrintaada iyo ku faraxsanaanta wararka 🙂
La dhejiyay November 17, 2011 at 3:33 PM
Oo maxaa yeelay isagu kama hor joogo, in haddii uusan isaga isku duubi lahayn ilaa uu kari kari waayo
Kaftan maahan JAJAJAJAJAJA !!!!!
Hagaag, waa hagaag, waa bog aad u fiican oo wuxuu noqday bog aan aad u jeclahay markii aan u haajiray Linux, had iyo jeer wuxuu leeyahay maqaallo wanaagsan iyo talooyin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inay sidan ku sii socdaan, waad ku mahadsan tihiin inaad khibraddiinna nala wadaagtaan.
Bogga aad ugu jeceshahay? … Sharaf inaad noo sameyso 😀
Sidii aan horayba u sheegay, si joogto ah ayaan u horumaraynaa oo u cusboonaysiinaynaa, kaliya waxaan u baahanahay xoogaa nasiib ah wax kalena ma jiraan, aad ayaan u kori doonnaa in bixiyahayaga WebHosting ay tahay inuu dhegaha ka soo jiito taraafikada badan ee aan abuuri doono HAHAHAHA
Waxaan rajeynayaa sidaas. Hambalyo iyo salaan iga timid Mexico.
Waa tan xD jajab ah
100 000 waxay la mid tahay 10 kor loo qaaday 5 -> Meeshii 10 ee binary ka tahay 2 jajab, waana tirada dadka halkan ka shaqeeya xD. 5-na waxay noqonaysaa matalaadda bilaha nolosha ee blog-ka Haha
Intaas oo dhan ka dib Haha, markaa waxba, hambalyo iyo sii wad xitaa intaa ka sii badan 😛
HAHAHAHAHA weyn geek HAHAHAHA runtii,
kaliya ... sifiican, hada ka hadli maayo faahfaahin, hadii qof ogaado wax weyn, laakiin waxaan doorbidayaa inaanan waxba sheegin ilaa layaabka laga ogaado hehe
Kaliya filo inaan aniga (iyo waxaan u maleynayaa in sidoo kale) aan ahay nin hammi sare leh, taas oo ah, waan ogahay in <° Linux ay leedahay karti, waxaan rabaa (waxaan rabnaa) inaan u qaadno xagga sare, taasna waa inaan marwalba hal abuurnaa oo aan horumarinaa nafteena. Waxaan bilownay inaan qabanno, keligeenna ma nihin 😉
Hagaag, maadaama ay jirto, waxaan galaa qiyaastii 4 jeer maalintii wayna sii socon doontaa.
salaan iyo farxad, horay usoco.
Waad ku mahadsantahay aqrinta iyo faallooyinka, waxaan rabnaa inaan sii wadno hagaajinta improving wax walbana waxaa leh aqristayaasheena 😀
Waxaan u maleynayaa inay tahay inay dhigaan miiska garaaca.
Yup waxaa laga yaabaa inaad sax tahay haha, waxa dhaca ayaa ah inaanan wali helin wax aan jeclahay oo ku filan 🙂
Waxaan kuugu hambalyeynayaa booqashooyinkaas 100 m ah oo aad ka dhigtay mid aad loogu riyaaqo oo lala wadaago macluumaadka boggan, kaas oo ku kasbanaya taageerayaal badan qaabkiisa gaarka ah ee qorista iyo faallooyinka, isku soo duub dhammaan ka qaybgalayaasha ka socda Zacatecas, Zac. Mexico oo sii wad shaqadan.
HAHAHA sida muuqata qof kastaa wuu jecel yahay habka wax loo qoro, ma aha mid "dhab ah" ama "rasmi ah" sida ku qoran baloogyada / boggaga kale, ha ka welwelin ma beddeli doonno hahahaha.
Salaan iyo mahadsanid joojinta iyo faallooyinka 😀
balooggu waa fiican yahay jawiguna wuu fiicanyahay, kahor intaan ugu jeclaa UL laakiin maanta <° linux wuxuu fadhiyaa boos mudnaan leh oo kuyaala calaamadayda.
Hambalyo, nasiib wacan horeyna u soco.
Runtii waxaan aaminsanahay inay shaqo fiican ka qabtaan balooggan, iyo, wixii ka sarreeya, aniga waxay ila tahay inay ku sameeyaan si daacadnimo ah, iyagoo (ama ugu yaraan aan ka tagaynin) dareen midnimo iyo wada-hadal, ka soo horjeedda nooc kasta oo gaar u ah danaha shaqsiyadeed.
Waan ku qanacsanahay dadaalka iyo u-hureynta qaar badan oo ka mid ah qorayaasha wax qora, kuwa wax qora iyo kuwa wax falanqeeya ee adduunka Linux, waana iska cadahay, waxaan ku faraxsanahay wixii aan ka bartay aqrinta dhammaantood. Laakiin waxaa jira baloog (linuxero), oo joogsaday jiritaankiisa dhowr sano ka hor, iyo inaan ku xasuusto oo kaliya tayada maqaaladiisa (ama boostada), laakiin sidoo kale sharaftiisa, ballanqaadkiisa iyo midnimadiisa (waxaan dhihi karaa: danayn) inay muujisay; Waxaan u jeedaa barta «Entretuxesypingüinos» ee caymis gaar ah (alias) Ceec. Oo haddaan xuso, waa sababta oo ah mararka qaarkood waxay i siisaa aragti ah in adiga, si ka duwan, laakiin sidoo kale si daacadnimo ah, ugu dhisto balooggaaga noocaas isku duuban. Waxaan rajeynayaa inaanan qaldamin, heh.
Ku muujiyaa lambarka Python ee nano (tifaftiraha terminal)
"Midig Guji + Udir Lifaaq Thunderbird" gudaha KDE